QM oo sheegtay in ilaa 3000 askari ay AU uga dhimatay Soomaaliya - BBC Somali - Warar
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 10 Mey, 2013, 04:52 GMT 07:52 SGA
Waxay qayb ka yihiin ciidamada nabad-ilaalinta AU ee Soomaaliya oo gaaraya ku dhowaad 18 kun oo askari.
Ku xigeenka xoghayaha guud ee Qaramada Jan Midoobay Eliasson oo London ugu waramay wariyayasha shirkii Soomaaliya intii uu socday.
"Waxaan doonayaa in aan xuso dalalka iyo askartooda si xoog leh naftooda ku bixiyay. Wax laga naxo ayay noqonaysaa in la ogaado in ilaa sadex kun oo askarta AMISOM ah lagu dilay inta sano ee AMISOM ay halkaas joogtay. Uganda iyo Burundi ayaa qasaaraha ugu badan uu soo gaaray. Ciidamada Kenya dabcan, waxay qayb wayn ka yihiin AMISOM." Jan Eliasson.
Ku xigeenka xoghayaha guud ee UN Jan Eliasson oo ka waramayey ciidamada AU ee Soomaaliya lagu dilay tan iyo sanadkii 2007Haddaba marka la bar bar dhigo tirada askarta AU ee ku dhimatay Soomaaliya, waxay ku dhow yihiin kuwa Qaramada Midoobay ee tan iyo 1948kii howlgalo ku dhintay, kuwaas oo gaaraya 3,096.
Ciidamada AU ee Soomaaliya jooga waxay qayb libaax ka qaateen xoogagga al-Shabaab oo laga saaray caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho iyo waliba magaalooyin kale oo waaweyn 2dii sano ee la soo dhaafay, laakinse xarakada Shabaab wali awood ayey u leeyihiin in ay weeraro isugu jira is-qarxin ay oo weeraro kaleba ku qaadaan goobo ka mid ah caasimadda iyo meelo kale oo dalka Soomaaliya ah.